Trano Smart - Smart Home Xiaomi HomeKit nataon'i Aqara! Famerenana ny seta miaraka amin'i Aqara Hub - SmartMe
Xiaomi Smart Home nataon'i Aqara! Famerenana ny seho avy amin'ny Aqara Hub
Aqar, xiaomi mahay trano
Ny zava-tsarotra rehetra dia misy ny fiandohany. Raha manontany tena ianao, rehefa sambany vao nahaliana anao ny trano iray hendry. Raha ny amiko dia ilay sehatra fanokafana ilay sarimihetsika «Back to the Future». Ary oviana no nanombohanao ny fianaranao tamina trano maranitra? Oviana ny trano manan-tsaina iray feno sensor sy fitaovana dia lasa zavatra ho anao, isaorana ny fiainanao lasa tsotra sy mahazo aina kokoa? Natombok'izany aho rehefa nanala boaty boaty iray avy amin'ny setra Aqara avy ao Xiaomi avy ao amin'ny zoro aho ary hoy aho tamin'ny tenako: avelao atomboka!
Ok, fa andeha miverina dingana iray, satria tsy ny rehetra mila mahalala ny atao hoe Aqara na Aqara Hub. Ity ny Xiaomi sub-marika, natokana ho an'ny trano manan-tsaina, izay tokony hananana kalitao avo kokoa noho ny vokatra Xiaomi. Tena malaza tokoa ao ambadiky ny rindrina lehibe, ary vao haingana no niseho tamin'ny fomba ofisialy tany Eropa. Ny fitaovana izay mandrafitra ny Aqara Hub dia mamorona foibe mpanome trano mahay.
Amin'ity famerenana androany ity dia hiatrika karama kely faran'izay mahay aho izay anolorako ho an'izay manomboka manatsara ny tranony. Ahitana fitaovana manaraka ireto ny kitapo ireto izay manamboatra ny teknolojia homekit:
Tanjona Aqara Hub.
Fanitarana varavarana sy varavarana varavarankely.
Senser amin'ny tondra-drano.
Sensor amin'ny fihetsiketsehana.
Ary ho fanampin'ny sensor sy ny hamandoana.
Ho ahy, io andiana vokatra marani-tsaina io no fototry ny trano azo antoka ary izy ireo dia mitarika ny tanjon'ny trano manan-tsaina ho an'ny rehetra. Ary ankoatr'izay, miaraka amin'ity andiany ity dia tsy miova ny tahan-tsarobidy amin'ny vidiny.
Xiaomi smart home - fahatsapana voalohany
Ny vokatra Aqara tsirairay avy dia tsara sy feno fonosana. Ao anaty boaty dia hahita vokatra foana ianao miaraka amin'ny torolàlana izay hanampy anao amin'ny asa sy fametrahana Xiaomi fampiharana sy fitaovana nefa tsy misy olana. Raha ny amiko dia torolàlana tamin'ny teny sinoa ilay izy, fa hahazo torolàlana amin'ny teny anglisy ianao na poloney aza.
Ny vavahady misy sensor dia voatahiry ao amin'ny loko amin'ny loko maro indrindra ny vokatra Xiaomi, i.e. fotsy. Ny vavahady sy ny mpanangona setroka dia lehibe kokoa, raha kely ny tsindrona amin'ny varavarana / varavarankely, tondra-drano sy hafanana dia kely. Azonao atao matetika ny mahita azy ireo mitambatra amin'ireo loko matanjaka (toa ny fotsy amin'ny mainty) na amin'ny kitay. Toa tena tsara.
Ny kapila fanokafana ny varavarana sy ny varavarankely dia ilay singa roa izay misy singa roa - ny paribolana kely kokoa sy lehibe kokoa. Raha tsorina dia misy andiana fitaovana marani-tsaina izay manamboatra ireo hetsika fototra ao an-trano dia toa maoderina sy manintona.
Fametrahana sy fanodinana fitaovana Aqara
Ny fanamafisana ny trano marani-tsaina Xiaomi miorina amin'ny vokatra Aqara dia atao amin'ny ambaratonga roa. Voalohany dia ampianao ny vavahadin'ny Aqara Hub, ary avy eo ireo sensor. Noho ny antony somary mahafinaritra dia namorona mpitari-dalana manokana izay ho hitanao eto. Ahitana ny filazalazana ho an'i MiHome sy ny fampidirana azy amin'ny fampiharana Apple Home (Apple HomeKit). Misaotra azy io dia hianatra ny fomba hanombohana fampiasana ny teknolojia mahay an-trano Xiaomi.
Aqara Hub avy any Xiaomi
Ny vokatra Aqara, raha tsy izay dia tsy hanomboka ny fampianarana miaraka amina trano hendry izahay dia i Aqara Hub, i.e. Goal daka. Ny vavahady dia natao hampifandraisana ireo fitaovana bebe kokoa ary mamela ny fifehezana lavitra azy amin'ny alàlan'ny wifi. Ampifamadihinay ny tsindrona na fifehezana bebe kokoa (Aqara Relay famerenana ho avy tsy ho ela). Tsy maintsy atsofohy amin'ny fotoana rehetra izany ary tokony ho eo afovoan'ny trano ary eo akaikin'ny router.
Ny tombony lehibe sy ny fahasamihafana lehibe raha ampitahaina amin'ny Xiaomi Hub dia ny fanohanan'ny Apple HomeKit. Midika izany fa ny vavahady mihitsy sy ireo fitaovana rehetra ifandraisantsika aminy dia afaka mifandray mivantana amin'ny fampiharana Home amin'ny fitaovana Apple. Ary na dia tiako be aza i MiHome, dia mbola mitantana tsara ny tokantranoko mahay tsara aho noho ny fanampian'ny Home. Amin'ny faramparan'ny famerenana dia hohazavaiko misimisy kokoa ianao.
Ny tarika Aqara avy any Xiaomi dia tsy tanjona fotsiny. Ny tombony lehibe iray dia ny fampiasa fanairana. Ny vavahady dia misy siramamy voaorina ary raha ampifandraisintsika amin'ireo tsindrona amin'ny endrika fanairana dia hiantso mafy izany. Eo amin'ny vavahady dia hahita bokotra iray izay ahafahantsika mamadika na mihodina ny fanairana, na dia ataontsika ho azy io aza na avy amin'ny iray amin'ireo fampiharana roa. Ny mpikirakira ny fihetsiketsehana dia mahatonga ny fiarovana an-trano mahay ho fiarovana ny olona ao an-trano.
Ny fiasan'ny vavahady farany dia jiro. Ankoatra ny siram-peo fanairana dia manana jiro mirehitra mena ny vavahady rehefa mihetsika ny famantarana. Azo ampiasaina ho jiro amin'ny alina izy io miaraka amin'ny sensor sensor.
Amin'ny tanjona iray dia safidy maro be io.
Fanitarana varavarana sy varavarana fikandrana
Ny sensor fototra amin'ny fototry ny ahafahantsika manomboka manangana ny fanairana ao an-trano ao anatin'ny teknolojia Xiaomi homekit dia ny tsipika fanokafana. Ny fitsipiky ny fandidiana dia toy izao manaraka izao: ny sensor dia misy singa roa izay tsy maintsy mifanakaiky be. Ny iray mipetaka amin'ny singa iray azo fehezina, ary ny iray amin'ny iray maharitra, e.g. varavarana sy ny manodidina azy. Raha tapaka ny fifandraisana eo anelanelan'ny sensor, dia toy ny rehefa misokatra ny varavarana, dia tsikaritr'ilay sensor fa nisokatra izy ireo. Raha ampiantsika ireo amin'ny efitrano mety izy, dia ho fantatsika hoe taiza no nisy ny fanovana.
Mitafy azy ireo amin'ny alàlan'ny kasety amin'ny lamosina. Mandritra ny fametrahana, ny fampiharana dia hampahafantatra antsika ny hoe akaiky ny sensor na raha mbola mila manatona azy ireo akaiky kokoa. Mariho fa tena kely ny elanelan-tany - vitsy monja ny hatsiaka. Aorian'ny fametrahana ny sensor amin'ny vavahady dia hiseho eo amin'ny MiHome Xiaomi sy Apple House.
Ny sensor io dia tsy misy fanamafisana betsaka, fa azo ampiasaina amin'ny automation maro:
Ny mandeha ho azy fototra dia fampandrenesana tonga amin'ny telefaona fa ny iray amin'ireo sensor dia nahatsikaritra ny fisokafan'ny varavarana na ny varavarankely. Afaka misafidy ny hanao izany foana ianao na rehefa tsy ao an-trano ianao. Tena ilaina izany raha tsy tadidinao na nanidy varavarankely na varavarana ianao. Mandoro ny fampiharana ianao ary mazava ny zava-drehetra.
Ny fanamafisana iray hafa dia ny asa fanairana. Azontsika atao ny manondro fa ny varavarana fanokafana sy ny varavarankely dia miteraka fanairana. Raha misy mahatsikaritra ny fisokafana rehefa misy ny fanairana, dia manomboka hikorodana sy hamirapiratra ny vavahady, ary hahazo fampandrenesana amin'ny telefaona momba ny fanairana isika. Azontsika atao ny mametraka ny fampidirana azy mandritra ny ora manokana na miorina amin'ny toerantsika rehefa miala isika na mankany an-trano.
Azontsika atao koa ny manamboatra fiara-miasa hafa izay ho voan'ny sensor. Ohatra, rehefa mamoha ny varavarana fidirana isika dia hanafina ireo jamba na handeha ny jiro amin'ny efitrano.
Ny dingana vita amin'ny alàlan'ny dingana vita amin'ny trano manan-tsaina dia hita ao amin'ireo mpitari-dalana anay.
Senser amin'ny tondra-drano
Intelo no nanavotra ny efitranoko ny sensor sensor ary ity dia iray amin'ireo fividianana tsara indrindra vitako hatreto. Ny sensor dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ilay voalaza etsy ambony. Rehefa mahatsikaritra zavatra iray izy (amin'ity tranga ity, rehefa mando) dia mandefa avy hatrany ny vavao amin'ny vavahady izy ary manomboka mikiakiaka. Ny vavahady avy eo dia miditra amin'ny maody fanairana (na nirehitra na tsia), ary manomboka mitoloko sy mena midorehitra koa izy io. Mahazo fampandrenesana amin'ny telefaona koa izahay miaraka amin'ny fampahalalana izay nahitana ilay fivoahana.
Ny tantara tena izy dia ny fampiasanao an'io sensor io dia roa andro taorian'ny fametrahana azy fotsiny. Nifindra tao amin'ilay trano izahay ary zara raha nametraka ny fitaovana rehetra ao an-trano. Efa tratran'ny tondra-drano roa aho, izay napetrako teo akaikin'ny milina fanasana sy teo ambanin'ny siphon, samy ao an-dakozia. Indray hariva, raha nijery fahitalavitra izahay, tampoka ny haitraitra sy ny tratran'ny tondra-drano dia nidradradradra, nahatsiravina ilay tabataba ary tsy fantatro ny vadiko izay hitranga. Noraisiko haingana ny findaiko ary nijery ilay fampandrenesana fa nahita X leomi Smart Home hita teo ny milina fanasana. Ny milina fanasana dia naorina ao an-dakozia ary ao ambaniny dia kofehy misy tombo-drano vita amin'ny rano. Rehefa avy nanala ny fantsona izahay dia tondraka tanteraka anay. Nivadika hoe ny hose milina fanasana dia nipoaka ary nanomboka tondraka ny zava-drehetra. Andro maro no nanamaina ny fanaka sy gorodona, fa raha tsy natao ho an'ny PLN 30 izany, dia tsy ho fantatsika akory ny momba azy, satria ny fantsona dia nitazona ny rano rehetra tsy handatsaka, ary mety hanimba fanaka vaovao ho an'ny lakozia sy ny tany izahay. Avy eo, nisy boka in-droa indroa (avy hatrany ny hose avy amin'ny milina fanasana sy ny fanasana vilia), nefa fantatray hoe aiza no mihazakazaka mba hampitsahatra azy avy hatrany.
Taorian'ity tantara ity dia nividy sensor roa hafa izay napetrako tany amin'ny toerana hafa izay mety hisy rano. Tombontsoa lehibe ny fahafaha-manana antoka amin'ny Xiaomi homekit.
Ny mpamantatra setroka dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny mpamantatra setroka hafa. Apetrakay eo amin'ny valindrihana eo akaikin'ny toerana mety hisehoan'ny afo izany (ka 95% ny tranga dia lakozia izany). Ao amin'ny sehatry ny sensor, azontsika atao ny mamaritra ny karazana toerana misy azy: na trano fitahirizam-bokatra ohatra, ohatra, izy io izay tokony ho mora tohina, na lakozia, izay misy vintana fanairana lehibe kokoa.
Ny fomba fampitahana dia mitovy amin'ny tsindry hafa, toy izany.Mahatsikaritra ny fandrahonana (amin'ity tranga setroka ity) ary manetsika siram-bolo anatiny, mafy be, ary koa fanairana ao anaty vavahady Xiaomi Aqara Hub ary fampandrenesana an-telefaona. Hatreto dia vao nitifitra indray mandeha ilay sensor raha vao nanao sakafo hariva ilay ramatoa. Noho izany, sensor iray izay tsy dia tiany loatra izy ????
Sensor amin'ny fihetsiketsehana
Ny sensor sensor dia miavaka amin'ny vokatra Aqary hafa. Ny zavatra voalohany manintona ny maso dia ny habeny kely. Ao amin'ny gorodona na amin'ny trano fisakafoanana dia zatra ny mpanamboatra habe lehibe isika. Ny sensor avy any Aqara dia kely kokoa, ka afaka manafina izany amin'ny toerana rehetra. Ny baikoina dia azo arahana irery na miaraka amin'ny tongotra. Avelan'ny tongotra ahafahantsika manamboatra ilay fitaovana ary apetrany ao anaty kaonty tsy mahazatra. Araka izany, azontsika atao ny mametraka azy, na mipetaka amin'ny rindrina na valin-drihana. Ny mety hitranga dia tsy hita eto.
Aorian'ny fanakambanam-bolo ny vavahady miaraka amin'ny vavahady dia afaka mampiasa ny fahafaha-mahefa feno rehefa afaka kelikely Azo ampiasaina ho singa fiarovana fiarovana amin'ny alàlan'ny fihetsehana ny hetsika ao amin'ny trano io rehefa lasa izahay dia mety hiteraka fanairana. Azontsika atao ny mametraka azy io hametraka arakaraka ny fanaovan-jiro isan-karazany toy ny jiro ny jiro rehefa miditra ny efitrano misy ny mari-pamantarana fa tokony hatao amin'ny alina ihany. Ity sensor ity dia fanitarana tsy lafo nefa mahasoa amin'ny rafitra Aqara.
Sensor sy hafanana
Ity sensor ity dia tsy mitovy amin'ny an'ny hafa satria tsy an'ny sokajy fiarovana izy io, fa an'ny sokajy mora. Na izany aza, vitsy loatra ny fiasa ananany hanana famerenana voatokana, noho izany nampidiriko eto izany. Araka ny anarany, dia mamantatra ny mari-pana sy ny hamandoana ao amin'ny efitrano iray izy. Ho fanampin'izany, mampiseho tsindry ihany koa izy io, fa tsy amin'ny hectopasikaly, fa amin'ny kilopasikaly - ampio zero iray monja dia ho madio ny zava-drehetra. Ankoatr'ireo fiasa ireo, ny sensor dia mampiseho amintsika koa raha ny mari-pana ao amin'ny efitrano iray dia tsara (saha maitso) sa tsia.
Ny sensor io dia manome fampahalalana fototra momba ny toetr'andro ihany, fa ny fahazoana mampiasa azy amin'ny automation dia be kokoa. Azontsika atao ny mampifandray ny ampahany amin'ny fanamafisana an-trano mahay Xiaomi miorina amin'ny mari-pana na ny hamandoana, e.g.
Fanombohana ny mari-pana raha ny mari-pana dia miakatra amin'ny ambaratonga vitsivitsy.
Manomboka ny humidifier raha misy hamandoana ambany ny rivotra.
Miparitaka ny jamba rehefa miakatra ny mari-pana, na mampiakatra azy ireo rehefa ambany.
Tena maro tokoa ny mety ary hasehonay anao ao amin'ny fizarana tutorial.
Ny fampiharana ho an'ny Aqara - MiHome sy Apple House
Raha fantatsika ny fomba fiasan'ny tranokala mahay rehetra, dia afaka manatona fangatahana roa lehibe isika, dia i MiHome avy ao Xiaomi sy Apple Dom. Araka ny nanoratako teo aloha, dia navelako ao anaty torolàlana ilay fanitsiana amin'ny antsipirian'ny torolàlana, ary eto aho hamaritana izay atolotry ireo fampiharana roa ireo.
Rehefa avy nanampy vavahady tao amin'ny MiHome ary nampifangaro azy tamin'ny HomeKit dia hiseho ilay fitaovana voalohany, izany hoe Aqara Hub. Avy amin'ny ambaratonga MiHome, amin'ny efijery voalohany dia afaka manomboka / manafoana ny fanairana sy jiro ianao. Avy eo manana fomba fijery roa hafa isika - mandeha ho azy sy fitaovana. Amin'ny automatisation, manangana seho (mpitari-dalana) isika, ary amin'ny alàlan'ny fitaovana, afaka manampy sensor hafa isika (azo atao ihany koa amin'ny alàlan'ny menio MiHome lehibe). Mikasika ny safidin'ny vavahady dia azontsika atao ny mametraka ny efitrano misy azy, ny feony sy ny feon'ny fanairana (ohatra ny sirenan'ny polisy) ary ny lokon'ny jiro. Nahavita nanamboatra ny vavahady aho tamin'ny misasak'alina ary rehefa navadiko ilay safidy fanamafisam-peo dia gaga aho fa nampiseho ny fahafahany feno ilay vavahady. Eny, tokony hiankohoka amiko ny mpifanila trano ...
Ao amin'ny Apple House dia manana safidy vitsivitsy kokoa isika. Aorian'ny fametrahana ny vavahady mankany amin'ny HomeKit, dia hiseho eo amin'ny menio lehibe ny fitaovana. Tsara ny manova ny anarana ary ampio amin'ny efitrano mety. Ao amin'ny Apple House dia afaka mihodina / miala amin'ny fanairana sy jiro ihany koa isika ary manao ireo automatique mitovy amin'ny Xiaomi MiHome. Ny safidy dia ambany kokoa, fa manamora kokoa amiko raha ny fampiharana an'io.
Manampy ny sensor fisokafana, tondra-drano, setroka ary mari-pana isika amin'ny fanampiana fitaovana. Tsaroanay ny milazalaza azy tsara sy manome azy ny efitrano, izay hahafantarantsika izay nisy zavatra hita. Ao amin'ny fampiharana Home dia tsy mila manao na inona na inona isika hiseho azy ireo - hanampy azy ireo ihany ny vavahady. Eto koa izahay dia milazalaza azy ireo ary manolotra azy ireo any amin'ny efitrano. Tsy misy safidy maro hafa amin'ity tranga ity.
Ny fiainana andavan'andro miaraka amin'i Aqara
Manana karazana fitaovana toy izany izahay dia efa manana Xiaomi Smart Home tena izy. Mampiasa azy io tsy an-kijanona isan'andro aho ary mahatsiaro tena ho voaro. Mazava ho azy fa tsy ny fanairana PLN 2 iray manontolo miaraka amin'ny ekipa mpiambina iray izay ho tonga ao anatin'ny 15 minitra, fa tsy isika rehetra no mila zavatra toy izany. Manoro hevitra ny olona manana trano aho mba hanao fanairana marani-tsaina ary hanangana iray mahazatra - raha sendra lozam-pifamoivoizana lehibe tokoa.
Ireo mpitsikilo tondra-drano sy setroka dia tsy hita ary izany no andraikitr'izy ireo. Izy ireo ihany no tokony hihazakazaka rehefa misy zavatra mitranga. Ny sensor sy ny fanokafana ny varavarankely sy ny varavarankely dia mampahafantatra ahy raha mihidy ny zava-drehetra na raha misy zavatra hadinoko ary mila manidy ny varavarankely aho. Ary ny sensor momba ny mari-pana dia tsy manome ahy ny angon-drakitra rehetra fotsiny, fa tena tsara amin'ny hazo koa 😉
Ankoatra ny vavahady, ny fitaovana rehetra dia miasa amin'ny batterie sy tsy misy tariby. Ohatrinona no haharitra amin'ny bateria iray? Sarotra ny milaza azy io satria nametraka azy ireo efa ho antsasaky ny taona lasa izay, ary hatreto dia tsy nila niahiahy momba ny fanovana bateria intsony aho.
Raha te hanomboka ny fitsangatsanganana amina trano maranitra amin'ny ankapobeny ianao na Xiaomi Smart Home, dia manoro hevitra anao aho amin'ny andrana Aqara amin'ny tanana ao am-ponao. Jereo fotsiny hoe ireto no fitaovana farany farany amin'ny pejinay vokatra. Mitovy ny vidiny, fa ny taranaka vaovao miasa amin'ny protokol Zigbee 3.0, izay manome fifandraisana tsara kokoa, fitaovana bebe kokoa ary kely kokoa ny fanjifana angovo.
Raha mampifandray trano mahira-tsaina amin'ny takelaka fanaraha-maso mahatsiravina ianao, mametaka rindrina, misintona tariby ary ilaina ny fahalalana ireo fiteny fandaharana, faly aho milaza aminao fa zavatra taloha io! ☺ Ankehitriny isika dia mifikitra amin'ireo fitaovana an-trano ao an-trano izay tiantsika hisy, na apetraka fotsiny eo. Ny fanomanana manontolo dia tsindry vitsivitsy ara-bakiteny, ary toy izany koa ny mandeha ho azy. Ary raha tokony handany zlotys vitsivitsy na an'arivony maromaro aza dia afaka manana trano hendry ianao, manidy ny tetibola amin'ny vola ambanin'ny 400 zlotys. Raha tokony tafiky ny mpikotrana sy mpanao trano ianao dia afaka manao izany amin'ny tenanao na amin'ny fanampiana. Ary tsy mila miandry herinandro vitsivitsy ianao amin'izany, hariva iray dia ampy.
Ary izany no karazana trano manan-tsaina izay tiantsika hofaritina any Polonina. Trano hendry iray dia:
Ity ny voalohany amin'ireo fanamarihana maro momba ny (tsy ho ela;)) ny vavahadin-tserasera lehibe indrindra momba ny hoe mahay saina any Polonina.